काठमाडौंका घरघरमा 'रिचार्ज इनार' अनिवार्य... :: चेतना गुरागाईं :: Setopati
काठमाडौंका घरघरमा 'रिचार्ज इनार' अनिवार्य गरिने
आकाशेपानी संकलन र भूमिगत पानी सञ्चित गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले 'रिचार्ज काठमाडौं' योजना अघि बढाएको छ। ‍आकाशेपानी सडकमा फाल्नुको साटो माटो भएको जमिनमा पठाउने गरी कार्ययोजना तयार भइरहेको छ।
चुलिँदो पानी अभाव र बर्खामा सडक-ढल जम्ने समस्या कम गर्न यस्तो योजना ल्याएको महानगरको वातावरण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बताए।
'पानीका मूल स्रोतदेखि इनार-धारा-ट्युबवेल सबै सुकिसके। रिचार्जमा काम नगर्ने हो भने भोलिका पुस्ता प्याकप्याक्ती हुन्छन्,' श्रेष्ठले भने, 'आकाशेपानी सडकमा बगाउने चलन छ। यो पनि कम हुनुपर्छ भनेर काम थालेका हौं।'
श्रेष्ठका अनुसार यसमा दुई तरिकाले आकाशेपानी संकलन गरिन्छ- घरमा ट्यांकी बनाएर वा इनार खनेर।
मुख्य जोड भने इनारमै दिइएको श्रेष्ठ बताउँछन्।
'यो काम गाह्रो छैन। आकाशेपानी हामी पाइपबाट सडकतिर हुत्याइरहेका छौं। अब इनारमा हाल्ने भनिएको हो,' उनले भने।
यसमा छत वा कौसीबाट बग्ने पानी पाइपबाट सिधै इनारमा खसाल्न सकिन्छ।
'यो सुन्दा कति नै पानी होला र भन्ने लाग्न सक्छ। तर, एक-एक घरको थोरै-थोरै पानी सडकमा जान रोक्ने हो भने धेरै हुन्छ,' उनले भने, 'त्यो पानी इनारमा जम्मा हुँदा जमिन रिचार्ज हुँदै जान्छ। यसले तत्कालै हाम्रो समस्या समाधान नहोला, तर यो भरपर्दो र दिगो उपाय हो।'
यस निम्ति महानगरले घरधनीहरूलाई इनार खन्न आर्थिक सहयोग गर्नेछ। नयाँ इनार बनाउन २५-३० हजार रूपैयाँ लाग्छ। महानगरले यो वर्ष ५० लाख हाराहारी बजेट छुट्टाएको छ। योजना छलफलकै चरणमा रहेकाले कति सहयोग दिने टुंगो नलागेको विभागीय प्रमुख श्रेष्ठले बताए।
'सुरूआतमा महानगरका सबै कर्मचारीलाई घरमा अनिवार्य रिचार्ज इनार बनाउन लगाउने योजना छ,' उनले भने, 'पछि घरको नक्सापास गर्दै इनार अनिवार्य गर्न सकिन्छ, जसरी सेप्टिक ट्यांक अनिवार्य छ।'
यस्तो इनार बनाउन सिमेन्टका रिङ र फिल्टर भए पुग्छ। सिमेन्टको लेप वा इँटा राखिँदैन। यसले पानी रिचार्जमा अवरोध ल्याउँछ।
'पहिले भइरहेका इनारको कुरा भएन, नयाँमा भने एउटा फिल्टर जाली र रिङ राखेर बनाए हुन्छ,' उनले भने, 'छतको पानी जाने पाइप त्यसैमा ल्याएर जोडिदिने।'
के काठमाडौंका धेरै घरमा यस्तो इनार भए पानी रिचार्जमा मद्दत पुग्छ?
उपत्यकाको परम्परागत पानी व्यवस्थापन प्रणालीका अनुसन्धानकर्ता तथा इञ्जिनियर पद्मसुन्दर जोशी यसलाई उत्तम उपाय मान्छन्। उनका अनुसार सामान्य अवस्थामा तीन महिनाको आकाशेपानी उपयोग गर्ने तरिका यही हो।
हरेक घरमा एउटा 'रिचार्ज वेल' बनाए जमिनमा पानी अडिएर बस्ने जोशी बताउँछन्। बारीमा तीन-तीन फिट लम्बाइ-चौडाइ र आठ/दस फिट गहिरो खाल्डो खनेर त्यसमा गिटी-बालुवा हालेर पनि यस्तो इनार बनाउन सकिने उनले बताए।
'यो खाल्डोमा आकाशको पानी जम्मा भएपछि जमिनले सक्नेजति सोस्छ, बाँकी जमेरै बस्छ। बढी भएकोलाई सानो पाइप राखेर ढलमै हालिदिँदा हुन्छ वा अन्त बारीमा पठाउँदा भयो,' उनले भने।
जमिनमा पानी जम्न थालेपछि एकाध वर्षमा आसपासका इनार र ढुंगेधारा रसाउन थाल्ने उनको भनाइ छ।
'खाल्डो बनाउन सक्दैनौं वा जग्गा छैन भन्नु मानसिकता अभाव हो। दुई आनामा बनेको घरमा पनि पानी ट्यांकी र सेप्टिक ट्यांकी त हुन्छ। यो फुच्चे खाल्डो बनाउन के गाह्रो? आफू र भावी सन्तानलाई सहज हुने काममा आनाकानी गरेर समस्या सल्टिँदैन,' उनले भने।
काठमाडौंभित्र १८ नगरपालिका छन्। नयाँ पालिकाहरूमा जनसंख्या वृद्धिदर ५ देखि १२ प्रतिशत छ। यसले नयाँ बस्ती थपिएका छन्। हामीकहाँ पानी अभाव उहिल्यैदेखि हो, नयाँ आएकालाई अझै चाहियो।
काठमाडौंका फाँट उहिल्यै घरले भरिइसके। जग्गा महँगो भएपछि मान्छे डाँडातिर उक्लेका छन्। चोभार, चन्द्रागिरि, नागार्जुन, शिवपुरी, स्वयम्भू हलचोक माथि घरैघर ठडिएका छन्। डाँडाबाट बगेर आउने पानीको मुहान फेदमा छ। अव्यवस्थित बसोबासले परम्परागत पानी व्यवस्थापन प्रणाली र मुहान तहसनहस भएको जोशी बताउँछन्।
जोशीका अनुसार अल्पकालीन योजना र 'जुगाड' ले पानी समस्या कहिल्यै सुल्झिँदैन। सबभन्दा पहिले काठमाडौंको वहन क्षमता कति भन्ने प्रस्ट हुनुपर्छ। सहरले धान्नसक्ने जनसंख्याबारे अध्ययन गरी थुप्रिन दिने कि नदिने टुंगो हुनुपर्यो र त्यहीअनुसार पानी जोहो गर्ने उपाय र योजना बनाइनुपर्ने उनी बताउँछन्।
'रिचार्ज वेल बनाउँदै गएर भएका स्रोत रिचार्ज गर्ने अभियान चलाए दिगो रूपमै दुःख कम गर्न सक्छौं,' उनले भने।
देशको झन्डै ३० प्रतिशत सहरी जनसंख्या बसेको काठमाडौंमा पानी पुर्याउन सहज छैन। मेलम्ची एउटा 'आस' हो। आइहाले पनि माग धान्दैन। काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ४२ करोड लिटर पानी माग हुन्छ। खानेपानी लिमिटेडले गर्मीमा मुश्किलले दस करोड लिटर वितरण गर्दै आएको छ।
'पहिलो कुरा त जनता आफैंले बुझेर इनार बनाउन जरूरी छ। महानगरका सेवामा छुट दिने योजना हामी बनाउन सक्छौं,' महानगर वातावरण विभाग प्रमुख श्रेष्ठले भने, 'कसैलाई गाह्रै हुने भए पनि सहयोग गरिहाल्छौं। यो योजनामा सबैले साथ दिए पानी अभाव कम गर्न सक्छौं। रिचार्ज भएपछि त बोरिङ गर्न पनि सहज हुन्छ।'
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २४, २०७६, १४:३२:००